The n'isiokwu ndị bu ụzọ gosiri na dijitalụ afọ emepụta ọhụrụ ohere ịnakọta na-enyocha-elekọta mmadụ data. The dijitalụ afọ nwekwara kere ọhụrụ usoro ziri ezi ihe ịma aka. Ihe mgbaru ọsọ nke isiakwụkwọ a bụ ka o nye gị ngwá ọrụ ndị ị chọrọ ime banyere ndị a usoro ziri ezi ihe ịma aka.
Ha bụ ugbu a na-ejighị n'aka na ojuju banyere ihe kwesịrị ekwesị àgwà nke ụfọdụ digital afọ elekọta mmadụ nnyocha. Nke a na-ejighị n'aka emewo ka abụọ yiri nsogbu, otu n'ime nke natara ọtụtụ ihe ndị ọzọ ntị karịa ndị ọzọ. Na otu aka, ndị nnyocha ụfọdụ e boro ebubo na-emebi ndị mmadụ nzuzo ma ọ bụ idebanye aha sonyere na unethical nwere. Okwu ikpe ndị a-bụ ndị m ga-akọwa n'isiakwụkwọ a-abụrịrị na isiokwu nke ọtụtụ arụmụka na-akparịta ụka. N'aka nke ọzọ, ndị usoro ziri ezi ejighị ihe n'aka enwewokwa chilling mmetụta, na-egbochi usoro ziri ezi na mkpa nnyocha si na-eme; a eziokwu na m na-eche na ọtụtụ obere ekele. Dị ka ihe atụ, n'oge 2014 Ebola akasiaha, ahụ ike ọha isi chọrọ ihe ọmụma banyere ihe agagharị nke ndị na ihe ndị kasị oké mmanya nje mba iji aka ilekwata akasiaha. Ekwentị mkpanaaka na ụlọ ọrụ ndị na-akowaputara oku ndia nke gaara nyere ụfọdụ ozi a. Ma, usoro ziri ezi na iwu nchegbu imikpu na-eme nnyocha 'mgbalị iji nyochaa data (Wesolowski et al. 2014) . Ọ bụrụ na anyị pụrụ ịzụlite usoro ziri ezi norms na ụkpụrụ na-akọrọ site ma na-eme nnyocha na ọha na eze-na m na anyi nwere ike mee nke a-mgbe ahụ anyị pụrụ njikota ike nke dijitalụ afọ ihe n'ụzọ na-na-ahụ na ọ bara uru ka mmadụ.
E nwere ihe dị mkpa iche n'etiti otú elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị na data ọkà mmụta sayensị mbanye research ụkpụrụ ọma. Na-elekọta mmadụ ndị ọkà mmụta sayensị, na-eche banyere ụkpụrụ ọma na-adịkwaghị ulo oru Review Boards (IRBs) na ụkpụrụ na ha na-tasked na ịmanye. Mgbe niile, otu ihe ndị kasị ahụrụ anya na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị na-enwe usoro ziri ezi arụmụka bụ site n'usoro iwu usoro nke IRB nyochaa. Data ndị ọkà mmụta sayensị, na aka nke ọzọ, nwere obere Ịhazi ahụmahụ na-eme nnyocha ụkpụrụ ọma n'ihi na ọ na-adịghị ọtụtụ ndị na-atụle n'isiokwu na kọmputa sayensị na injinịa. Abughi nke ndị a na-eru nso-iwu dabeere na obibia nke na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị ma ọ bụ ndị ad-hoc obibia nke data ọkà mmụta sayensị-dị mma ruru eru na-elekọta mmadụ nchọpụta na dijitalụ afọ. Kama nke ahụ, m kweere na anyị dị ka dị ka a obodo ga-enwe ọganihu ma ọ bụrụ na anyị ịmụta a ụkpụrụ ndị dabeere na obibia. Ya bụ, na-eme nnyocha kwesịrị ịtụle ha research site ẹdude iwu-nke m ga-dị ka nyere na iche kwesịrị followed- na site n'aka ihe n'ozuzu usoro ziri ezi ụkpụrụ. Nke a ụkpụrụ ndị dabeere na obibia ana achi achi na-eme nnyocha nwere ike ime ka ihe ezi uche mkpebi banyere nnyocha nke iwu na-adịghị ma e dere ya ma na anyị nwere ike ikwurịta okwu anyị echiche na ndị ọzọ na-eme nnyocha na ọha na eze.
The ụkpụrụ ndị dabeere na obibia nke m advocating abụghị ihe ọhụrụ; ọ ga-adọrọ on ọtụtụ iri afọ nke gara aga echiche. Ka ị ga-ahụ, na ụfọdụ ụkpụrụ ndị dabeere na obibia eduga ná ikpochapụ, actionable ngwọta. Na, mgbe ọ na-adịghị eduga ndị dị otú ahụ ngwọta, ọ kọwara na ahia-offs-aka, nke dị oké egwu n'ihi na-egbu onye kwesịrị ekwesị itule na inwe ike ịgwa ha ihe i ji echiche ka ndị ọzọ na-eme nnyocha na ọha na eze. Ọzọkwa, dị ka ị ga-ahụ, na-ewere a ụkpụrụ ndị dabeere na obibia na ọ dịghị achọ ihe gabigara ókè oge. Ozugbo ị na-amụta ụkpụrụ ndị bụ isi, i nwere ike iji ha ka ha na ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma ihe anya banyere a dịgasị iche iche nke nsogbu. N'ikpeazụ, ụkpụrụ ndị dabeere na obibia bụ ya zuru ezu n'ozuzu na m atụ anya na ọ ga-enye aka n'agbanyeghị ebe gị nnyocha na-ewe ebe ma ọ bụ ebe ị na-arụ ọrụ (eg, mahadum, ọchịchị, NGO, ma ọ bụ ụlọ ọrụ).
Ibuot emi a haziri iji nyere aka a na-ebughị onye na-eme nchọpụta. Olee otú i kwesịrị iche echiche banyere ụkpụrụ ọma nke gị onwe gị ọrụ? Gịnị ka ị pụrụ ime iji mee ka gị onwe gị na-arụ ọrụ ọzọ usoro ziri ezi? Ná Nkebi nke 6.2, Aga m na-akọwa atọ digital afọ nyocha oru ngo na site usoro ziri ezi arụmụka. Mgbe ahụ, ná Nkebi nke 6.3, Aga m nkịtị ndị na kpọmkwem ihe atụ na-akọwa ihe m na-eche bụ isi ihe kpatara ya maka usoro ziri ezi ejighị ihe n'aka: Ubara ike maka na-eme nnyocha na-edebe na nnwale na ndị na-enweghị nkwenye ha ma ọ bụ ọbụna mmata. Ndị a ike na-agbanwe ngwa ngwa karịa anyị norms, iwu ya, na iwu. Ọzọ, ná Nkebi nke 6.4, Aga m na-akọwa anọ ẹdude kwuru ga-enyere gị echiche: Nkwanye Ùgwù maka Persons, Beneficence, Justice, na nrubeisi nye iwu na Public Interest. Mgbe ahụ, ná Nkebi nke 6.5, Aga m ichikota abụọ sara mbara usoro ziri ezi frameworks-consequentalism na deontology-nke pụrụ inyere gị tụgharịa uche otu n'ime ndị kasị mie emie nsogbu ndị i nwere ike: mgbe o ji kwesị ekwesị n'ihi na ị na-ethically enyo enyo n'aka iji nweta ihe ethically kwesịrị ekwesị ọgwụgwụ. Ụkpụrụ ndị a na usoro ziri ezi frameworks ekwesị unu ga-akpali n'ofè n'ilekwasị anya na ihe ka ẹdude ụkpụrụ na dịkwuo gị si ekwurịta okwu gị echiche na ndị ọzọ na-eme nnyocha na ọha na eze (ọgụgụ 6.1). Na na ndabere, ná Nkebi nke 6,6, m ga-atụle anọ ebe ahụ na-esiri nnọọ digital afọ na-elekọta mmadụ na-eme nnyocha: asian nkwenye (Nkebi 6.6.1), nghọta na ijikwa ọmụma ize ndụ (Nkebi 6.6.2), nzuzo (Nkebi 6.6.3 ), na-eme mkpebi ndị metụtara ụkpụrụ na ihu nke ejighị ihe n'aka (Nkebi 6.6.4). N'ikpeazụ, ná Nkebi nke 6.7, Aga m ikwubi na atọ bara uru Atụmatụ na-arụ ọrụ na mpaghara na-edozibeghị ụkpụrụ ọma. Na Historical Odide Ntụkwasị, Aga m na-akọwa na mmalite nke ugbu a usoro nke nnyocha ụkpụrụ ọma nlekọta na United States gụnyere Tuskegee Syphilis Study, bụ Belmont Report, na Common Ọma ahụ, na Menlo Report.
Ọgụgụ 6.1: The iwu ndị na-achịkwa nnyocha na-ewepụtara ụkpụrụ nke n'aka nke na-ewepụtara usoro ziri ezi frameworks. A isi arumaru isiakwụkwọ a bụ na-eme nnyocha kwesịrị ịtụle ha research site ẹdude iwu-nke m ga-dị ka nyere na iche kwesịrị followed- na site n'aka ihe n'ozuzu usoro ziri ezi ụkpụrụ. The Common Ọma ahụ bụ ndị set nke ụkpụrụ ugbu a na-achịkwa ọtụtụ Federally-kwụrụ ụgwọ nchọpụta na United States (maka ozi ndị ọzọ, hụ Historical Odide Ntụkwasị). The anọ ụkpụrụ si abụọ-acha anụnụ anụnụ-rịbọn ogwe na ọ chọrọ ka ya na-enye usoro ziri ezi nduzi na-eme nnyocha: The Belmont Report na Menlo Report (maka ozi ndị ọzọ, hụ Historical Odide Ntụkwasị). N'ikpeazụ, consequentialism na deontology bụ usoro ziri ezi frameworks na e mepụtara site ọkà ihe ọmụma ruo ọtụtụ narị afọ. A ngwa ngwa na crude ụzọ ya ịmata ọdịiche abụọ frameworks bụ na consequentialists-elekwasị anya na nsọtụ na deontologists-elekwasị anya na-esi.